Ama-WikiBooks - enzelwe ini? | Kusuka kuLinux
Impela uyazivula uzibuza ukuthi kungani uyisebenzisa? Noma ubungazi nokuthi ikhona.
I-WikiLibros (i-AKA WikiBooks) iphrojekthi kadadewabo eya kuWikipedia futhi iyingxenye yeWikimedia Foundation. Le phrojekthi iqoqo lezincwadi zokuqukethwe zamahhala, amabhukwana kanye neminye imibhalo yokufundisa, ebhalwe ngokubambisana futhi ihlelwe njenge-Wikipedia.
Isayithi lisebenza ngobuchwepheshe be-wiki, okusho ukuthi umsebenzisi ngamunye angasebenzisana ekubhalweni kwanoma iyiphi incwadi, ngokuchofoza kusixhumanisi esithi "Hlela" esikhona ekhasini ngalinye.
Ezinye zezincwadi zokuqala zazingezokuqala, kanti ezinye zaqala ukukopishwa kweminye imithombo yencwadi evulekile yokuqukethwe ku-Intanethi.
Konke okuqukethwe kusayithi kungaphansi kwelayisense ye-Creative Commons Attribution / Share-Alike License. Ngenxa yalokho, njengakuWikipedia, okuqukethwe kungabiwa kabusha ngenkathi kugcinwa ilayisensi efanayo nokunikezwa kubalobi bokuqala.
Yebo, sengivele ngiyaqonda ukuthi ama-Wikibooks kepha ... yini kimi?
Qedela inkambo yesiNgisi
Singathola izincwadi zezilimi, ezeSayensi Ehlelekile, Isayensi Yemvelo, Isayensi Yezenhlalo, Informatics, njll
Uma uyayithanda futhi unolwazi oluthile, ungadala izincwadi noma uthuthukise lezo ezikhona. Hhayi-ke, akukho lutho, kufanele ngikushiyele isixhumanisi: http://es.wikibooks.org/wiki/Portada Kujabulele! 😀
Ngiyethemba uyithandile, ungakhohlwa ukungilandela ku-twitter.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Ama-WikiBooks - enzelwe ini?
Kuhle impela, ukukhuluma iqiniso. Kepha njengoba ngibambe iqhaza elikhulu ekuhleleni izindatshana ezikwiWikipedia, ngiyethemba azikuthinti ukubhalwa kwezindatshana ezinjengeWikipedia.
Yimaphi ama-troll ¬_¬ ngelinye ilanga enza umsebenzi wami wesikole (Copy-paste) nalapho uthisha wami ewufunda: «bese kuthi jfabjwbfhbbfbsnfbfbhbrhba fnbs cfhsh sh h hs jjf hww de…» («(_¬) Trolls -.-
Ingabe ubuyekeza i-Pear os 8, uma leyo OS ukhuluma ngayo kakhulu
Pear OS?, Naaaaaah uhambe ngaphambi kwami, ngivele ngiyilayishe ... ngiyilinde ngesineke leyo ndatshana haha ​​...
Thumela mayelana ne-Pear 8 Work In Progress 😉
Ngiyabona ukuthi usebenzisa okuyisisekelo, ngiyakumema ukuthi ungene lapha: https://blog.desdelinux.net/que-hacer-despues-de-instalar-elementary-os-0-2-luna/
Sanibonani futhi nibe nempelasonto enhle!
Yebo ?? Ingabe kukhona ukunyathela okungaka?
Buza uthisha wami ¬_¬
Yebo, ngiyakhumbula kakhulu ukuthi ngelinye ilanga bashicilela i-Ubuntu athikili njenge-trolling.
Ngikuthanda kakhulu ukubona ukuphawula kwama-Admin kokuthunyelwe kwami ​​😉
Ukubingelela nokubonga ngokuphawula!
Hhayi-ke, manje sebeqinise ukuqapha i-athikili kakhulu. Awusakwazi ukuhamba njengangaphambili, kepha iqiniso ukuthi inani lama-troll abekwi-Wikipedia lalikhanga.
Kuhle ... kuzoba kuhle ukuqala ukwenza izinhlelo?
Sula! Kuphela ukuthi kunezincwadi ezingaphelele, kepha ufunda okuthile kulokho okufundayo 😉
[Imidlalo ye-Linux: 3] I-Minecraft